Fomba iray Handikàna ny Fifidianana Filoham-pirenena any Nikaragoà: ‘Demokrasia Tsy Misy Fifanarahana’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2016 4:35 GMT
Daniel Ortega, filoha voafidy any Nikaragoa in-telo nisesy. Sary nalaina tao amin'ny Wikimedia Commons.
Tsy nahagaga na ny mpijery na ny mponin'i Nikaragoà ny fandresen'ny Filoha Daniela Ortega tamin'ny fifidianana tany Nikaragoà tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra 2016. Ny fifidianana, izay niteraka hatezerana kely tamin'ny olom-pirenena, dia namela an'i Ortega hitondra ao anatin'ny telo taona misesy ao amin'io Firenena ao Afovoan’ Amerika io.
Mifototra amin'ny fomba fitarihany ny Mandateheza Sandinista ho Fanafaham-Pirenena (FSLN), ny antoko ankavia izay nitana toerana lehibe tao anatin'ny folo taona tany Nikaragoà ny fotoam-piasàna lavabe an'i Daniel Ortega tamin'ny politika tao Nikaragoà. Napetraka nandritra ny revolisiona tany Nikaragoa sy firodanan'ny fitondrana jadon'i Atanasio Somoza ny fototry ny FSLN. Narahan'ny ady lavabe mba hihazonana ny fahefana manohitra ny Contras Nikaragoiana — na ny tsindrin'entan'ny revolisiona — izay tohanan'ny governemanta Amerikana.
Nahasarika kiana tsy tapaka ny governemantan'i Ortega sy ny taona naha-teo amin'ny fitondrana azy, indrindra indrindra mikasika ny dingan'ny demokrasia ao amin'ny firenena. Iray amin'ireo lafiny maha-be resaka indrindra amin'ity fifidianana lasa teo ity ny fanendrena ny vadin'i Ortega– filoha lefitra voafidy amin'izao fotoana izao–ho toy ny mpiara-mirotska ho kandidà.
Ao amin'ny bilaogim-baovao Amerikàna Latina Con Distintos Acentos (miaraka amin'ny tsindrimpeo samy hafa), hadihadian'i Renée Salmerón, mpikaroka, ny fomba hahatakarana bebe kokoa ireo vokatry ny fifidianana, miaraka amin'ny fahasarotan'ny governemanta Nikaragoaiana sy ny fanantenan'ny firenena ho an'ireo taona hoavy. Mandika ny antontan'isa ary manondro angona manokana, fa indrindra manadihady ny fomba mahatonga ny demokrasia Nikaragoaiana, amin'ny faniriana sy tanjona rehetra, toa tsy mampiray ny olom-pireneny manodidina tanjona iray iraisana:
Andrés Pérez Baltodano, mpampianatra sady mpanao fanadihadiana, dia milaza hevitra lehibe indrindra ao amin'ity firenena ity, izay misy “demokrasia ara-pifidianana tsy misy marimaritra ara-tsosialy”. Tamin'ny Talata lasa teo, nampahatsiahy ny La Prensa fa folo taona lasa izay ny adihevitra farany nifanatrehan'ireo kandidà ho filoham-pirenena. Tsy nanatrika izany adihevitra izany ny filoha voafidy vao haingana, ary ankoatra izany, tsy niseho teo anoloan'ny Antenimieram-pirenena hatramin'ny taona 2008.
Tsipihan'i Salmerón koa ny fomba anehoan'ny lahateny politika, izay mamaritra ny lasan'i Nikaragoà vao haingana, tsy mba mitaona fifandraisana amin'ny mponina ary tsy mitarika ho amin'ny fandraisana anjara bebe kokoa::
Diso ny mpanohitra sy ny governemanta. Ao anatin'izao rivotra politika izao, nahita isika fironana sasany amin'ny fitantarana nataon'ny mpanohitra sy ireo mpandalina vitsivitsy amin'nyy fanombanan'izy ireo ny governemanta. Mifandray amin'ireto antony manaraka ireto ireo fironana ireo: voalohany, ampifandraisin'izy ireo ny zavatra nisy tamin'ny fifidianana politika tamin'ny 1990 sy ny amin'izao fotoana izao. Faharoa, ampitahain'izy ireo amin'ny filoha Ortega ilay mpanao didijadona, Anastasio Somoza […]. Fahatelo, manamafy izy ireo fa misy sivily mitam-piadiana any avaratry ny firenena (mpikomy). Fahefatra sady farany, ampifandraisin'izy ireo amin'ny politikan'ny Amerikana amin'ny Ady Mangatsiaka ny Lalàna Nica (Lalànan'ny Fepetra Fampiasam-bola Nikaragoaiana). Manondro ny lasa izany rehetra izany.
Tsy mitarika ho amin'ny fifampiresahana io kabary io, ary tsy miteraka fientanana eo amin'ny fitondrantenan'ny olom-pirenena.
Hoy izy manohy::
Raha ny momba ny fitondram-panjakana, dia tsy hainy ny nifehy ny ambaratonga rehetra, na ny mpanohana na ny tsy mpanohana. Ireo olom-pirenena mahazo tombontsoa avy amin'ny fandaharanasa sosialy ary manatevin-daharana ny Kabinetran'ny Fahefan'Olom-pirenena [endrika Governemanta eny ifotony izay amin'ny ankapobeny dia ny olom-pirenena milatsaka an-tsitrapo no mandrafitra azy] dia mpanohana ny FSLN ny ankamaroany. Nanao antsirambina ny fisarahana ara-tantaran'ny Sandinisma-mpanohitra Sandinisma izay nanjaka tao am-pon'ny fiarahamonina io, ary nanjary niharihary nandritra ireo fifidianana tamin'ny alalan'ireo mpanohana mpomba ny governemanta manoloana ireo mpandà tsy hifidy
Fifidianana izay tsy manorina demokrasia
Mifandray amin'ny fandalinana fisavasavàanravina ny fifidianana ny iray amin'ireo sehatry ny famakafakana. Ho an'i Salmerón sy ny namany, betsaka koka ny zavatra miditra amin'ny fanorenana ny demokrasia noho ny fanaovana fifidianana fotsiny. Misy singa marobe, ary mijanona ho voafetra ny fisoloantena; ankoatra izany, raha tsy tafiditra amin'ny adihevitra ireo vondrona fandraisana fanapahankevitra resaka sy fifampiresahana, dia atahorana ho lasa toy ny endri-javatra zara raha misy dikany ny fifidianana :
Na izany aza, tsy avy amin'ny kandidà irery ihany ny andraikitra noho ny tsy fandraisana anjara amin'ny adihevitra. Na ny haino aman-jery na ny anjerimanontolo dia tsy nitondra ireo kandidà mba hiresaka ny politikan'ny governemanta. Ary tsy dia tsara ho an'ny fifidianana izany. Araka ny sosokevitr'i McConnell (2009:310), Tsy maintsy dinihantsika hoe hatraiza no ilàna ny fanaovana fifidianana “mahomby ary manara-dalàna” amin'ny famoronana solontenan'ny demokrasia liberaly. Ny zavatra rehetra dia maneho fa tsy ampy izany. Raha niresaka momba ny tahan'ny fankatoavana ambony nandritra ny volana maro isika, ary amin'izao fotoana izao dia nahazo ny maro an'isa tanteraka ny governemanta, nahoana no mbola mahare tsikera momba ny fifidianana misy hosoka na misy diso isika.
Governemanta amin'ny andron'ny fandriampahalemana, fampifangaroana namana sy fahavalo
Tsy nanjavona teny anaty vaovao ny fitsabahan'ny avy any ivelany sy disadisa mitam-piadiana. Na izany aza, niova ny fotoana ary mifandray bebe kokoa amin'ny ady anatiny noho ny fandresen-dahatra ivelany ireo fanamby goavana amin'izao fotoana izao. Ho an'i Salmaron, mitohy ny fanamby momba izay fomba hampiraisana an'i Nikaragoà aminà tanjona iraisana ary ny fomba handresena ny fameperana napetraka momba ny tsy fisian'ny fanohanana avy amin'ireo mpiaradia stratejika sasany:
Nahazo izay nilainy ireo mpifidy mpanohana ny FSLN: antoko politika iray mitantana anaty fotoanan'ny fandriampahalemana. Tsy afaka hiteny hevitra momba ny “imperialisma” na “kapitalisma mahery vaika” intsony izy. Tsy afaka miresaka momba ireo fahavalony intsony izy. Ary ankoatra izany, tsy afaka hitanisa ny namany intsony. Mila tenenina izany. Andao atsahatra ny habobo, nitsahatra ireo tombontsoa azo tamin'ny fifandraisana tamin'ny filoha teo aloha Hug Chavez. Tsy mamokatra araka ny tena tokony ho vitany ny firenena.
Tsy foana ny fifandroritana politika. Misy sehatra manana ny toerany ao amin'ny fiarahamonina. Tsy azo lavina izany. Misedra fanamby maro ny governemanta, toy ny fiarovany ny tenany, ny ady amin'ny kolikoly sy fampiharana ny mangarahara, ny fampidirana sy ny tena fiovàna ara-tsosialy sy toekarena.